उत्तम ट्विटर खाताहरू प्रबन्ध गर्न उत्तम तरिका Martech Zone
बिहीबार, अप्रिल 7, 2016 बिहीबार, अप्रिल 7, 2016 Douglas Karr
कृपया मलाई भन्नुहोस् कि तपाईं अझै पनि ट्विटरमा खुशी हुदै हुनुहुन्छ ... मलाई प्लेटफर्म मन पर्छ र सायद सँधै हुनेछ। त्योले भन्यो, मैले म्याकको लागि डिफल्ट ट्विटर डेस्कटप अनुप्रयोगको साथ महिनौं संघर्ष गरें। मेरो प्रणाली क्रल गर्न ढिलो हुनेछ, र ट्विटर अन्ततः जवाफदेही हुनेछ। म केवल अनुमान लगाउँदै छु कि विकासकर्ताहरू र QA मान्छे अनुप्रयोग परीक्षण गर्दै छन् धेरै अनुयायी र दिन भर मा धेरै अपडेट छैन म जस्तै।
I थियो प्रयोगHootsuite तर यो त्यति ठूलो थिएन। प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस केहि अजीब छ, र म विश्वास गर्दैन स्पेस ट्वीटहरू बीच राम्रोसँग सेट गरिएको छ, त्यसैले यो सबै धमिलो देखिन्छ। र मलाई ब्राउजरको सट्टा अनुप्रयोग खोल्न मन पर्छ किनकि म प्रायः दुर्घटनावश ब्राउजर बन्द गर्छु।
यसको प्रयोग नगरेको वर्ष पछि, मैले डाउनलोड गर्ने निर्णय गरें TweetDeck र यसलाई अर्को प्रयास दिनुहोस्। हाम्रो प्रकाशन को पार, मेरो पुस्तक, एक आगामी घटना, र हाम्रो ईमेल प्लेटफार्म, म आठ खाताहरु को प्रबंधन। हो, यो एक दुःस्वप्न थियो ... अहिले सम्म!
TweetDeck बहु खाता सुविधाहरू समावेश:
एक सजिलो ईन्टरफेसमा बहु टाइमलाइनहरू मोनिटर गर्नुहोस्।
भविष्यमा पोस्ट गर्नका लागि अनुसूची ट्वीटहरू।
उभरने जानकारी संग जारी राख्न को लागी अलर्ट खोल्नुहोस्।
स sear्लग्नता, प्रयोगकर्ताहरू र सामग्री प्रकार जस्तो मापदण्डमा आधारित खोजी खोजीहरू।
तपाईंको वेबसाइटमा राख्न कस्टम टाइमलाइनहरू निर्माण र निर्यात गर्नुहोस्।
कुशल नेभिगेसनका लागि सहज कुञ्जीपाटी सर्टकटहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
अनावश्यक आवाज हटाउन प्रयोगकर्ताहरू वा सर्तहरू म्यूट गर्नुहोस्।
रिफ्रेसलाई फेरि कहिले हिट नगर्नुहोस्: रीड-टाइममा ट्विटडेक टाइमलाइन स्ट्रिम।
एक हल्का वा गाढा विषयवस्तु छनौट गर्नुहोस्।
ट्वीटडेकले टीम व्यवस्थापन पनि समावेश गर्दछ!
सायद सब भन्दा ठूलो आश्चर्य जब ट्वीटडेकको कुरा आउँछ भने त्यो हो टीम व्यवस्थापन सिधा अनुप्रयोगमा निर्मित छ! म सजिलैसँग गर्न सक्छु टोली सदस्यहरु बीच खाता साझा गर्नुहोस् प्रति प्रयोगकर्ता इजाजत पत्र शुल्क तिर्न बिना वा, खराब, एक उद्यम सामाजिक व्यवस्थापन प्लेटफर्मको लागि। मँ टोली सेटिंग खोल्छु र ट्विटर खाताहरू थप्छु र चाहे ती केवल खाताबाट ट्वीट गर्नेछन् वा स्वामित्व साझा गर्नेछन्!
सबै इमानदारीतामा, म विश्वास गर्दछ कि ट्विटरले यसको डेस्कटप OSX अनुप्रयोग रिटायर गर्नुपर्दछ र यसको सट्टामा ट्विट डेक प्रस्ताव गर्नुपर्दछ। यो निर्धक्क कार्य गर्दछ। म विश्वस्त छु कि त्यो के हुनेछ भनेर, जबकि, पछिल्लो महिना देखि ट्विटरले यो घोषणा गर्यो विन्डोज संस्करण बन्द गर्दैविन्डोज प्रयोगकर्ताहरूलाई यसको सट्टा वेब अनुप्रयोगमा लगइन गर्न आवश्यक पर्दछ।
TweetDeck अझै एक रूपमा उपलब्ध छ क्रोम अनुप्रयोग र म्याक अनुप्रयोग अहिलेको लागी। यस्तो देखिन्छ कि विन्डोज प्रोग्राम केवल सेवानिवृत्त भएको थियो किनकि यो सजिलो थिएन ट्विटर प्रमाणहरू प्रबन्ध गर्नुहोस् कुशलतापूर्वक
कृपया टेकडेकलाई एउटा प्रयास दिनुहोस् यदि तपाईं म्याकमा हुनुहुन्छ र अनुप्रयोग स्टोर रेटिंग्समा अनुप्रयोगलाई केही प्रेम देखाउनुहोस्! मैले गरेँ!
टैग: बहु ट्विटर खाताहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्Tweetdecktwitterट्विटर प्रबन्धनट्विटर टीम प्रबंधन
अप्रिल 7, 2016 मा 9: 25 एएम
म सहमत छु! मेरो लागि, ट्विटर सबैभन्दा कम प्रयोगकर्ता-अनुकूल सामाजिक प्लेटफर्म हो। मैले भर्खरै TweetDeck फेरि प्रयोग गर्न थालें, र वास्तवमै यसलाई प्रयोगकर्ता-अनुकूल फेला पारे। बाडेको मा धन्यवाद!